Ubuntu 10.04 dia misy izao! | Avy amin'ny Linux
Ubuntu 10.04 dia misy izao!
Farany Ubuntu 10.04 sy ny derivatives rehetra dia nivoaka! Taorian'ny fahatarana tsy nampoizina dia nampandrenesina tamin'ity hafatra ity tao amin'ny lisitry ny mailakao fa misy ny kinova farany an'ny Ubuntu 10.04 LTS "Lucid Lynx". Na dia ity aza ity no fahatelo amin'ny Extended Support (LTS), 3 taona eo amin'ny birao ary 5 taona amin'ny mpizara, mifantoka indrindra amin'ny fanatsarana ny fitoniana fa tsy manampy endri-javatra, dia misy fampiasa vaovao tena lehibe.
Eo amin'ny birao:
Fampidirana mivantana amin'ny Twitter, identi.ca, Facebook ary tambajotra sosialy hafa miaraka amin'ny MeMenu vaovao.
Ubuntu Software Center 2.0 debut ny interface vaovao ary manohana ny lozisialy atolotry ny Ubuntu, ny mpiara-miasa Canonical ary ny developer ao amin'ny Launpad.
Integrated Ubuntu One miaraka amin'ny habaka fitehirizana maimaimpoana 2GB, ary hatramin'ny 50GB amin'ny $ 10 isam-bolana.
Fivarotana mozika Ubuntu One hividy mozika tsy misy DRM ary hitahiry izany amin'ny kaontinao Ubuntu One.
Fanontana Ubuntu Netbook (UNE) miaraka amina fampiatoana haingana kokoa ary hanohizana ireo fiasa izay hanitatra ny androm-piainany, ho fanampin'ny interface tsara ho an'ny efijery kely; fa niaritra 18 volana monja.
Ao amin'ny mpizara:
Lahatahiry tsy miankina voaaro.
Tsotra kokoa ny mametraka sy mitantana ny be sy be izao.
Fanatsarana ny virtualization amin'ny fampiasana Libvirt sy KVM.
PHP 5.3, Python 2.6, Ruby 1.9.1, MySQL 5.1, Django 1.1, sns.
Masinina virtoaly nohatsaraina ho an'ny Ubuntu Enterprise Cloud sy Amazon EC2.
Toy ny mahazatra, ny fika hafa ofisialy Ubuntu dia nohavaozina niaraka ihany koa, anisan'izany ny Kubuntu (miaraka amin'ny KDE SC 4.4 ary mamoaka ny Netbook Remix), Xubuntu (miaraka amina lohahevitra vaovao ary nampiditra ny "Ubuntu Software Center"), Edubuntu (miaraka amin'ny LTSP 5.2 ary installer graphique tanteraka), Mythbuntu (miaraka amina lohahevitra vaovao hita maso sy MythTV 0.23) ary Ubuntu Studio (tsy misy afa-tsy amin'ny sary DVD). Ny tsy tonga lehibe dia i Lubuntu, izay mbola manambara ny Beta 3 kinova 10.04 ho farany farany indrindra.
Ireto ny rohy handefasana ireo kinova samihafa amin'ny Ubuntu 10.04. Aza adino fa tsara ny misintona ireo sary ISO amin'ny alàlan'ny riandrano fa tsy amin'ny alàlan'ny fampidinana mivantana nentim-paharazana, satria, farafaharatsiny, andro voalohany, dia tena hianjera ireo mpizara.
http://releases.ubuntu.com/releases/10.04/ (Desktop Ubuntu, Netbook ary mpizara)
http://releases.ubuntu.com/kubuntu/10.04/ (Kubuntu Desktop sy Netbook Remix)
loharanom-baovao: Ho ela velona Linux & Ubuntu.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ubuntu 10.04 dia misy izao!
Inona no hatao aorian'ny fametrahana an'i Lucid?
Pandorga GNU / Linux: distro Breziliana mahaliana ho an'ny ankizy